Nepali Rajneeti | ललितपुर अदालत भित्रै महिला कर्मचारीसँ’ग यौ:न स:म्बन्ध राखेको भिडियो सिसिटिभीमा कै’द !
जेठ १९, २०७८ बुधबार ५०१ पटक हेरिएको
भरतपुर का’ण्डको फैसला सुनाएर चर्चा र वि’वादमा रहेको न्यायलय फेरि अर्को एउटा यौ’नका’ण्डका कारण चर्चामा आउने भएपछि त्यसलाई गु’पचुप पारिएको छ । न्याय दिने निकाय न्यायलयमित्रै अस्थायी, करार र अ’विवाहित महिला कर्मचारीमाथि डरला’ग्दो यौ’न शो’षण हुँदो रहेछ भन्ने कुराको बलियो प्र’माण हो यो । एउटा काररामा रहेको कर्मचारीको निम्ति काठमाडौंको बसोबासलाई आर्थिक रुपले धान्न कति गा’ह्रो हुन्छ सबैलाई थाहै छ । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
यही वि’वशताको लाभ लिँदै खुशी पार्नु पर्ने हाकिमले तिनीहरुको यौ’न शो’षण गर्ने गरेका छन् । तर, कुरा त्यसबेला बाहिर आयो जब उनीहरुले कार्यलयमा अगाडि नै फिट गरिएको सिसिटिभीलाई हे’क्का नराखी आफ्नो यौ’न लि’लालाई पूर्णता दिए । यस्ता प्रविधि मासिनको सहयोगी बनाउन जडान गरिएका भए पनि यो पटक भने घाँडो बन्यो र सबै पोल छताछु’ल्ल भयो । प्रशंग केही अघि मात्र न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ भनी ३ लाख रुपैयाँ बुझ्दै गरेको मु’द्दा फाँटका नायब सुब्बा श्याम अर्याल रंगेहात प’क्राउ परेको जिल्ला ललितपुरको हो ।
यो घ’टना भएको छ महिला पनि भएको छैन । त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हाम्रो क्षेत्रको कुरा हो, हामी नै का’रबाही गर्छौं भन्दै उनलाई त अख्तियारको पञ्जाबाट छुटाइन तर अहिले उजुरी दर्ता फाँटमा तै’नाथ भगवानको नाम गरेको सुब्बाले भण्डार कोठामा राति सवा सात बजे त्यहीँ करारमा कार्यरत अवि’वाहित युव’तीसँग म्याद जारी गर्ने को’ठामा राखेको यौ’न स’म्बन्धको भिडियो सिसिटिभीमा देखिएको हो। अदालतप्रति आस्था घ’टछ भनेर यस्ता घट’नालाई गुपचुप राख्ने न्यायमूर्तिहरुको दि’मागमा यसरी अप’राध लुका’उँदा वि’कृति ब’ढ्छ भन्ने कुराको चेत कहिले खु’ल्ने होला ? आजको जनआस्था साप्ताहिकमा यो खबर रहेकाे छ ।*** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
यो घ’टना भएको छ महिला पनि भएको छैन । त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हाम्रो क्षेत्रको कुरा हो, हामी नै का’रबाही गर्छौं भन्दै उनलाई त अख्तियारको पञ्जाबाट छुटाइन तर अहिले उजुरी दर्ता फाँटमा तै’नाथ भगवानको नाम गरेको सुब्बाले भण्डार कोठामा राति सवा सात बजे त्यहीँ करारमा कार्यरत अवि’वाहित युव’तीसँग म्याद जारी गर्ने को’ठामा राखेको यौ’न स’म्बन्धको भिडियो सिसिटिभीमा देखिएको हो। अदालतप्रति आस्था घ’टछ भनेर यस्ता घट’नालाई गुपचुप राख्ने न्यायमूर्तिहरुको दि’मागमा यसरी अप’राध लुका’उँदा वि’कृति ब’ढ्छ भन्ने कुराको चेत कहिले खु’ल्ने होला ? आजको जनआस्था साप्ताहिकमा यो खबर रहेकाे छ ।*** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *** युगलपोष्टवाट